သားအိမျ အသားလုံးမဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ? ? ? – Askstyle
သားအိမျ အသားလုံးမဖွဈအောငျ ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ? ? ?
သားအိမ် အသားလုံးဟာ အသက် ၃၀ နှင့် ၅၀ကြား အမျိုးသမီး ၂၀-၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။
(၁) သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို သိနားလည်ပါ။
အမျိုးသမီးတွေအသက်ကြီးလာလေလေ၊ သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလေလေပါ။ မိသားစုရာဇဝင်မှာ သားအိမ်အသားလုံးဖြစ်သူရှိရင် သင့်မှာ သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်နိုင်ခြေ ယောဘုယျအားဖြင့် သုံးဆ ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
(၂) လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်တယ်ဆိုရင် သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
၃) ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးခြင်းကြောင့် သားအိမ်အသားလုံး မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်နိုင်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ကလေးမွေးတာဟာ အမျိုးသမီးတွေကို သားအိမ်အသားလုံးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း အနည်းငယ် ရှိတတ်ပါတယ်။
ပဋိသန္ဓေတားဆေးသောက်တာကြောင့် သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၅) ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။
အဝလွန်တာကြောင့် သားအိမ်အသားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆ၊ သုံးဆပိုများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနဲ့ အရပ်အမောင်းပေါ် အခြေခံပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အညွှန်းကိန်း BMI က ၁၈.၅ နဲ့ ၂၅ ကြားရှိသင့်ပါတယ်။ ၂၅ ထက်ကျော်တယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို အခုပဲ လျှော့ချသင့်ပါပြီ။
၆) အနီရောင်အသား စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ အနီရောင်အသား (ဥပမာ-အမဲသား) ကိုများများစားတာကြောင့် သားအိမ်အသားလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တာရယ်ကို ပိုမိုမြင့်တတ်စေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ မက်ကရယ်ငါးနဲ့ အတူနာငါးတို့လို ငါးကိုစားတာက သားအိမ်သားလုံးကြောင့် တစ်သျှူးရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၇) အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားပါ။
အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို များများစားတာကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ သားအိမ်အသားလုံး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
၈) သားအိမ်အသားလုံးဖြစ်လျှင် ပေါ်တတ်သော လက္ခဏာများကို သိနားလည်ပါ။
သားအိမ်အသားလုံး ဖြစ်တဲ့အခါ နာကျင်တာ၊ ရာသီလာရင် သွေးဆင်းများတာ၊ သွေးဆင်းများတဲ့အတွက် သွေးအားနည်းတာ၊ ဆီးအိတ်နဲ့ အစာဟောင်းအိမ်အပေါ် ဖိအားသက်ရောက်တာနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ရောင်ရမ်းတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေ ခံစားရရင် သားအိမ်အသားလုံးဖြစ်နေပြီးလားဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Credit: Good Health & အမျိုးသမီးနှင့် ကျန်းမာရေး
သားအိမျ အသားလုံးဟာ အသကျ ၃၀ နှငျ့ ၅၀ကွား အမြိုးသမီး ၂၀-၈၀ ရာခိုငျနှုနျးမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ သားအိမျအသားလုံး ဖွဈနိုငျခွကေို လြှော့ခနြိုငျဖို့ အောကျပါနညျးလမျးတှကေို သိထားသငျ့ပါတယျ။
(၁) သားအိမျအသားလုံး ဖွဈစနေိုငျသညျ့ အန်တရာယျကို သိနားလညျပါ။
အမြိုးသမီးတှအေသကျကွီးလာလလေေ၊ သားအိမျအသားလုံး ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားလလေပေါ။ မိသားစုရာဇဝငျမှာ သားအိမျအသားလုံးဖွဈသူရှိရငျ သငျ့မှာ သားအိမျအသားလုံး ဖွဈနိုငျခွေ ယောဘုယအြားဖွငျ့ သုံးဆ ပိုမြားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
(၂) လကေ့ငျြ့ခနျးကို ပုံမှနျလုပျဆောငျပါ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အမြိုးသမီးတဈဦးဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျ လုပျတယျဆိုရငျ သားအိမျအသားလုံး ဖွဈနိုငျခွမေရှိဘူးလို့ သိရပါတယျ။
၃) ကိုယျဝနျဆောငျ၊ ကလေးမှေးခွငျးကွောငျ့ သားအိမျအသားလုံး မဖွဈစရေနျ ကာကှယျနိုငျ။
ကိုယျဝနျဆောငျပွီး ကလေးမှေးတာဟာ အမြိုးသမီးတှကေို သားအိမျအသားလုံးမဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျစှမျး အနညျးငယျ ရှိတတျပါတယျ။
ပဋိသန်ဓတေားဆေးသောကျတာကွောငျ့ သားအိမျအသားလုံး ဖွဈနှုနျးကို လြော့ကစြပေါတယျ။
၅) ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးခြုပျပါ။
အဝလှနျတာကွောငျ့ သားအိမျအသားလုံးဖွဈနိုငျခွေ နှဈဆ၊ သုံးဆပိုမြားစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအမြိုးအစားနဲ့ အရပျအမောငျးပျေါ အခွခေံပွီး ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးခြုပျသငျ့ပါတယျ။ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအညှနျးကိနျး BMI က ၁၈.၅ နဲ့ ၂၅ ကွားရှိသငျ့ပါတယျ။ ၂၅ ထကျကြျောတယျဆိုရငျ သငျ့ကိုယျအလေးခြိနျကို အခုပဲ လြှော့ခသြငျ့ပါပွီ။
၆) အနီရောငျအသား စားသုံးမှုကိုလြှော့ခပြါ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အနီရောငျအသား (ဥပမာ-အမဲသား) ကိုမြားမြားစားတာကွောငျ့ သားအိမျအသားလုံးဖွဈနိုငျတဲ့ အန်တာရယျကို ပိုမိုမွငျ့တတျစတေယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆယျလျမှနျငါး၊ မကျကရယျငါးနဲ့ အတူနာငါးတို့လို ငါးကိုစားတာက သားအိမျသားလုံးကွောငျ့ တဈသြှူးရောငျရမျးမှုကို လြော့ကစြပေါတယျ။
၇) အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား စားပါ။
အစိမျးရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သဈသီးဝလံတှကေို မြားမြားစားတာကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျမှာ သားအိမျအသားလုံး မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျတယျလို့ လလေ့ာမှုတှအေရ သိရပါတယျ။
၈) သားအိမျအသားလုံးဖွဈလြှငျ ပျေါတတျသော လက်ခဏာမြားကို သိနားလညျပါ။
သားအိမျအသားလုံး ဖွဈတဲ့အခါ နာကငျြတာ၊ ရာသီလာရငျ သှေးဆငျးမြားတာ၊ သှေးဆငျးမြားတဲ့အတှကျ သှေးအားနညျးတာ၊ ဆီးအိတျနဲ့ အစာဟောငျးအိမျအပျေါ ဖိအားသကျရောကျတာနဲ့ ဝမျးဗိုကျရောငျရမျးတာတို့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလက်ခဏာတှေ ခံစားရရငျ သားအိမျအသားလုံးဖွဈနပွေီးလားဆိုတာ သိနိုငျဖို့ သားဖှားမီးယပျအထူးကု ဆရာဝနျနဲ့ တှဆေုံ့ ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။
Credit: Good Health & အမြိုးသမီးနှငျ့ ကနျြးမာရေး